Wednesday May 20, 2015 - 09:27:36 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
History (BurcOOnline) 20.05.2015 Shirkii aayo-katashiga beelaha waqooyi, wuxuu magaalada Burco ka furmay 04.MAY.1991-kii. Shirkaasi markii uu socday 12 maalmood, ayaa waxaa raag-saday,go'aamadii ka soo baxaayay shacabkii Somaliland. Sida runta ahna siyaasiyiintu way ka soo horjeedeen in Somaliland si indha la'aana oo caadifad ah lagu jiro, inbadan ayayna ka warwareegeen inay qaataan go'aanka gooni isu taaga Somaliland.
Haddaba waxaa dhacday in Subaxnimadii 16.MAY.1991-kii, ay magaalada Hargeysa ka soo baxaan shacab iyo mujaahidiin baddan oo SNM ahi, waxayna soo mareen Berbera oo iyana iyadoo oodaheeda jiidanaysa soo raacday, waxay wateen baabuur badan oo uu ku jiro gaadhi dab-demis ah oo casi,,waxayna soo galeen magaalada Burco galabnimadii 16.MAY.1991-kii. Burcana iyadoo Sida daadka u soconaysa ayay ku darsantay, waxaana markiiba cirka isku shareertay xamaasadii dadka, waxaana loo dhaqaaqay madashii uu ka socday kalfadhigii 2aad ee SNM, halkaas oo isweer laga qabtay, usha cirka loo tuurana ayna dhulka ku dhacayn, dadkan waxaa soo kiciyay oo hor boodaayay, alle ha u naxariistee Muj;Axmed Maxamed Hallac oo ah ninkan aad sawirkiisa halkan ku aragtaan iyo alle ha u naxariistee Mujaahid Yaxye Xaaji Ibraahim.
Shacabku waxay dalbanayeen in isla galabnimadaa lagu dhawaaqo la,soo noqoshada Somaliland, wax aan intaa ahayna ayna ka aqbalayn.qaadanayna.cabaar markii uu buuq, qaylo iyo sawaxan ay socotay, oo shacabkii la aamusiin kari waayay, ayaa waxaa gaadhi Garaasida ah oo meesha taagnayd dul fuulay Chief Caaqil Maxamed Daahir, Caaqilku Saddex jeer ayuu yidhi Allaahu Akbar,Allaahu Akbar, Allaahu Akbar. Markaas ayaa shacabkiina ka daba yidhaahdeen, ayna aamuseen, wuxuuna caaqilku markiiba mikirifoonka ku wareejiyay Mujaahid Ibrahim Maygaag Samatar, Ibraahim wuxuu shacabkii u sheegay inay is dejiyaan, iyaguna (waa madaxdee) ay go'aan degdeg ah gaadhi doonaan, wuxuu kaloo u sheegay inay galabtaas oo khamiis ahayd iska kala tagaan, berina ay jimce tahay, markaa ay Sabtida ka warsugaan.
Iyadoo ballantu sidaas ahayd ayaa haddana culayskii shacabka ka imaanaayay ay madaxdii SNM-tu xamili waayeen, isla maalin-nimadii Jimcaha ayaa Gaadhi sameecad saarantahay,laga naadinayaa Todobadii qodob ee shirku gaadhay, ee qodobkiisa ugu horeeya ahaa inay Somaliland Xorayadeedii lixdankii ay dib ulla soo noqotay. gaadhigaas Sameecadu saarnayd ee laga sheegayo toddobada qodob oo ay lahayd dawlladii hore ee Siyad Barre, Siiba Wasaaradii dhirta iyo Daaqa, waxaa waday nin la odhan jiray Diiriye Bandow oo gaadhigaas sidiisa u xafiday, SNM-tana u waday markii danbe. Naanaysta Diiriye Bandow waxaa loogu bixiyay, gaadhiga uu waddo ayaa ahaa kii Bishii Koobaad ee 1987-kii laga naadinaayay Bandowdii Burco lagu soo rogay, Sidaas aawadeed ayay ninkaas reer Burco ugu bixiyeen Diiriye Bandow. Waxaa isna maalintaas gaadhiga saarnaa oo go'aamada yeedhinaayay nin hore u ahaa shaqaalihii golayaasha hanuuninta ee dawladii hore, ninkaas oo si farshaxanimo ah u naadinayay toddobadaas qodob ee SNM-tu gaadhay. Waxaaana isna ninkaas la odhan jiray Khadar Cabdillaahi Caaqil Yare. Iyadoo sidaas loo baahiyay qodobadii shirka ayayna shacabku weli aamin sanayn, baahintaas oo ay ka warsugayeen waxa sabtida dhici doona.
Sidii ay ballantu ahayd Sabtidii ayaa la gaadhay, oo ku beegnayd 18.MAY.1991-kii. Maalintaas oo uu Gudoomiyihii Golaha dhexe ee SNM, Muj; Ibraahim Maygaag Samatar uu ku dhawaaqay go'aankii ay SNM iyo guurtidii beeluhu isla soo gaadheen.. Kaas oo ahaa in Somaliland Xoriyadeedii ay dib ulla soo noqotay, ayna ka baxday, Midowgii ay la gashay Somalia 1.July.1960. Markii uu Ibraahim intaa ku dhawaaqay ayuu ku wareejiyay Mikrafoonka, Gudoomiyihii SNM,Muj Cabdiraxman Axmed Cali oo Isna cadeeyay in go'aankaas uu Ibraahim sheegay sax yahay, ayna la soo noqdeen Xoriyadoodii. Markaas ayay shacabkii naftu ku soo noqotay, Madaxdii meesha joogtayna ay isu dabamareen inay go''aankaas qaateen, welibana uuna ka noqosho lahayn go'aankaasi, shacabkoodana ay ku taageersan yihiin. waxaa la dejiyay calankii Somalia, waxaana la saaray kii dhaq-dhaqaaqa SNM. Waxaa maalintii oo dhan socotay dabbaal-dega, waxaadna dadka moodeysey in jannadii loogu bushaareeyay farxada ka muuqatay awgeed. Hadraawi oo sannadkii hore mar la waraysanaayay wax laga waydiiyay maalintaas, wuxuu yidhi '''' Saddex maalmood ayayna farxad aawadeed dadku waxba cunin oo la iska jiifay".
Somaliland maanta waxay jirsatay 24 sano, dad ahaan, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan,aqoon ahaan,iyo si kastaba way u kortay. Markaa waxaa la inooga baahan yahay inaynu illaashano oo aynu isku duubnaano, isna taageerno, dalkeena dantiisana ka wadda shaqayno.
Illaahay Khayrka ha ina waafajiyo.